श्रीमान श्रीमतीबीच मनमुटाब भइरहन्छ भने बेडरुममा यी कुराहरु नराखेकै राम्रो ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/श्रीमान श्रीमतीबीच मनमुटाब भइरहन्छ भने बेडरुममा यी कुराहरु नराखेकै राम्रो ?
१.बेडरुमलाई सजाएर राख्नुहोस,बेडरुममा फोहोरहरु जम्मा हुन नदिनुहोस । २.बेडरुममा पानी सँग सम्बन्धित फोटोहरु नराख्नुहोस,तर पहाडको फोटो भने राख्न सक्नुहुनेछ ।
३.बेडरुममा अपाराजिताको फूल राख्नुहोस । ४.बेडरुममा आशुँ आएको वा उदास खालको फोटो नराख्नुहोस,यो फोटोले सम्वन्धमा नैरास्यता बढाउछ ।
५.बेडरुममा झ्यालको छेउमा बेड हुनुहुदैन । ६.बेडरुममा मौसम अनुसार फल राख्नु पर्दछ । ७.बेडरुमको झ्याल फुटेको,भाच्येको हुनुहुदैन ।